ဓမ္မရသ: အရိပ်မဲ့ပန်း မနွမ်းစေချင်…၊
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 22.9.08
ကျေးဇူးပါပဲ အစ်ကိုရေ.. ညီမလေး အစ်ကို ပေးထားတဲ့ ဒီက လိပ်စာတွေကို ပဲဆက်သွယ်ပြီး နိုင်သလောက် လျှုဒါန်းလိုက်ပါမယ်. အစ်ကို အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ပါစေ....
လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခုလိုအလုပ်မျိုးက တကယ်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်လဲ တတ်နိုင်သလောက် ဆက်သွယ်လှုဒန်းပါ့မယ်။
ဒီပိုစ့်လေးက သိပ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပိုစ့်လေးပါ။ ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် နိုင်သလောက်ကို လှူဒါန်းသွားပါ့မယ်။
ကိုအောင်ဦးရေ...အခုလို ဖော်ပြပေးတာကိုက သူတို့ လေးတွေအတွက် ရေကြည်တစ်ပေါက်ပေါ့ဗျာ။ ရေတစ်ပေါက်နဲ့တစ်ခွက်လုံး မပြည့်နိုင်ပေမယ့် ခြောက်သွေ့ နေတဲ့ နေရာလေးတွေမှာတော့ အနည်းငယ် စိုစွတ်သွားတာပဲလေ။ ဒီရေပေါက်လေးတွေ အားလုံးစုပေါင်းလိုက်ရင် ထိုက်သင့်သလောက်တော့ ပြည့်သွားမှာပဲဗျ။ သာဓုပါဗျာ။ စိတ်ချ ကျနော်လည်း ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းလိုက်ပါ့မယ်။
မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် ပို့စ်လေးက အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် ကိုအောင်ဦးရေ … တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ညွှန်ပြပေးတဲ့အတွက်လဲ သာဓုခေါ်ပါတယ် …. ဆုဝေလဲ ဒီသတင်းလေးကို တတ်နိုင်သမျှ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ့မယ် … ကိုအောင်ဦးပြောသလို ရေများရာမှာ မိုးရွာပေးကြမယ့်အစား မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသမှာ မိုးရေတစ်စက်တစ်ပေါက်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွာသွန်းပေးမယ်ဆိုရင် လိုအပ်နေကြတဲ့သူတွေခမျာ ဘယ်လောက်များ ၀မ်းသာကြမလဲမသိဘူးနော်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ post ပါ.... မြန်မာတွေ အတော်များများ ဒီလိုအတွေးတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းလှပတဲ့ ဥယာဉ်ကြီး မဝေးတော့သည်ပေါ့.. ဒီလို POST တွေ များများရေးနော်... အားပေးတယ်